Waa Kuma Garsooraha Lavatory Doortay Kulanka Adag Ee Man Metropolis vs PSG? – Axadle
Pep Guardiola ayay kooxdiisu bandhig heersare ah soo muujisay lugtii hore, iyagoo markii ugu horreysay raadinaya in ay yimaaddaan finalka Champions League. Sannadkii 2016 ayey Metropolis timid wareegga afarta kooxood ee ugu dambeeya waxaana reebtay Actual Madrid iyadoo waqtigaas uu Metropolis tababare u ahaa Manuel Pellegrini.
Lugtii hore ee ka dhacday magaalada Paris toddobaadkii hore, Man Metropolis ayaa 2-1 kusoo garaacday PSG oo hal ciyaartoy looga saaray kaadh cas, waxaana gool uu kooxda garoonkeeda joogtay hoggaanka ugu dhiibay Marquinhos ka daba yimid Kevin de Bruyne iyo Riyad Mahrez oo dhaliyey laba gool oo shan daqiiqadood u dhexeeyeen.
Mauricio Pochettino ayay kooxdiisa u taallaa shaqo adag oo ah in ay iyagoo marti ah kusoo guuleystaan 2-0 ama ka badan haddii ay doonayaan in ay usoo gudbnaan finalka sannadkii labaad oo xidhiidh ah.
UEFA ayaa xaqiijisay garasooraha qabanaya kulankan adag, waana Bjorn Kuipers oo u dhashay waddanka Netherlands ama Holland, kana mid ah garsooreyaasha ugu fiican waqtigan kubadda cagta. Waxa calan-wadeyaal ama gacan-yareyaal u noqon doona oo garoonka labadiisa dhinac istaagi doona Sander van Roekel iyo Erwin Zeinstra.
Björn Kuipers oo ay da’diisu tahay 40 jir, waxa VAR u fadhiyi doona Pol van Boekel iyo Dennis Higler, kuwaas oo ka caawin doona wixii garab ah ee uu uga baahdo ama qaladaad waaweyn ee uu arki waayo oo talooyin kasiin doonaan si uu go’aan uga qaato.
Dhamaan garsooreyaasha sare ku xusan ayaa u wada dhashay waddanka Netherlands ama Holland, waxaase soo raaca oo ka duwan garsooraha afraad ee kala dhex-taagnaan doona Pep Guardiola iyo Mauricio Pochettino, beddelladana samayn doona, kaas oo ah Tasos Sidiropoulos oo u dhashay waddanka Giriigga.